I-Cyclamen | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | March 2020
Indlela yokukhulisa i-cyclamen ekhaya
I-Cyclamen (i-Cyclamen - kusukela ku-Greek. I-cyclos - umbuthano) - isitshalo sekhaya esihlala isikhathi eside somndeni we-Primula (latin Primulaceae). Izwe lakwa-cyclamen liyi-Central Europe ne-Asia Minor. Muva nje, izimbali zezitshalo ziye zaveza izinhlobo ezintsha zezitshalo ezitholakala emaphethelweni aseMedithera, eCaspian naseMnyama.
Yiziphi izitshalo zasekhaya ezifanele ekamelweni lakho
Ikamelo lokulala liyindawo esondelene kakhulu edinga umoya oyingqayizivele, lowo ofuna ukungena kuwo ekhoneni lakho. Imibhede, ikhabethe nezinye ifenisha akwanele lokhu, futhi kuzodingeka utshale ikamelo lokulala. Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi izitshalo zingagcinwa kanjani ekamelweni lokulala kanye nendlela yokuzinakekela kahle.
Yini esiza i-cyclamen?
Isikhathi esibandayo ngaso sonke isikhathi siletha izifo ngisho nezifo eziwumshayabhuqe. Kudingeka sithenge izidakamizwa ekhemisi, manje esebiza kakhulu. Kodwa-ke, ungasebenzisa izindlela zokusebenzisa imithi yendabuko, okuye kwagcina ukuhlakanipha iminyaka eyizinkulungwane ngisho nangamanje, ngekhulu lekhulu leminyaka yezokwelapha, ngokukhululekile uyabelana ngawo wonke umuntu.